Belarus, sibhedlela "Krynica": Izibuyekezo
"Krynica" - ngokunethezeka Belarusian impilo yokungcebeleka, okuyinto kuhloswe hhayi kuphela sokuzilibazisa, kodwa futhi wokubuyiselwa impilo. It enchants izivakashi ubuhle bemvelo, umoya ohlanzekile futhi elinamanzi emoyeni wobungane kule indawo ethokomele. Noma ubani onendaba impilo yabo, wena ngokuphelele kumele uvakashele kule ndawo eyingqayizivele.
"Krynica" ingenye zokungcebeleka endala ezempilo, elise ensimini ka Belarus. Sibhedlela itholakala endaweni yokungcebeleka izinto ezinenzuzo republic (Zhdanovichi).
Le ndawo waqala ukuthuthukisa kudala njengoba 1906 ukuhola inqubo eyaziwa isibalo somphakathi futhi udokotela I. U. Zdanovich. ukuzilibazisa IMisa abantu abasebenza uqalile kule ndawo kusukela ngo-1922, lapho kuvulwa ekhaya iholidi "Zhdanovichi".
Isimo sokukhululeka ngokwenkolo endaweni
izimo zezulu Ukhululekile ezilindele labo uvakashele indawo "Krinitsa". Izibuyekezo iholidi baye kule ndawo resort abonisa esithambile futhi zivame iphazamise ebusika, kanye ukufudumala ehlobo nge predominance sezinsuku libalele.
Isilinganiso lokushisa laminyaka yonke kuwubufakazi 5.3 degrees. Kulezi zindawo kukhona kusukela amahora 1800 kuya ku-1850 kwelanga ngonyaka. Imibandela sezulu ukhululekile ngokwanele ngenxa umswakama ongaphakeme (amaphesenti 55-60). Konke lokhu kudala izimo for unyaka wonke climatotherapy.
imithombo yemvelo impilo
Emuva ekuqaleni kwekhulu lama-20. yabe seyaziwa ukuthi ekujuleni resort Zhdanovichi kukhona izingqimba lamanzi esiphethu. Ngo 1956-1960 GG. iziphethu ucwaningo yayiqhutshelwa. Ngesikhathi esifanayo, futhi baye bathola izinhlobo ezimbili ku resort endaweni sulfate-chloride-sodium lamanzi esiphethu. Eyokuqala yalezi - ongaphakeme (3.5 amagremu ilitha), kanti eyesibili - maphakathi (12.2 g ilitha) kwezinsalela namaminerali. Ukutholakala kwaleli qiniso kwaba imfuneko ukuqhubeka resort.
Ukwakhiwa kulesi sibhedlela
Isakhiwo sokuqala impilo yokungcebeleka "Krinitsa" lwakhiwe abantu abangu-250. Lomlomo waso senzeka ngoJanuwari 1966, ngemva konyaka, izivakashi wathatha umzimba wesibili. Wayefuna ukuyobopha amakholwa uhlale abantu abangamakhulu amabili namashumi ayisithupha.
Kakade eminyakeni yokuqala ukusebenza kwawo ukulinganisela kunalokho okusezingeni eliphezulu welashwa ahlinzekwa "Krynica" abaphumule sibhedlela. ochwepheshe lezivakashi bakhomba ukuphumelela ukwelashwa of iziguli pathologies wokugaya ukudla.
Izinto, kusho ukususa izifo
lamanzi esiphethu iyona esemqoka ekwelapheni isici zokungcebeleka. Zisetshenziswa ukusetshenziswa Ingaphakathi nengaphandle. Ukusebenzisa sibhedlela nokuthi sapropel udaka, ekhishwe echibini Sudobl.
"Krynica" sibhedlela inezidingo Hydro isisekelo sayo. Siqukethe imithombo ezinhlanu abe amamitha amakhulu amathathu namashumi ayisikhombisa-nanhlanu ukujula. Amanzi ezikhishwe kubo, ibonakala ngokucacile futhi kungekho nto enemibala emihle e impahla yayo ngokomzimba. Abanalo nephunga. lokushisa lamanzi esiphethu ivela degrees eziyisishiyagalombili kuya kweziyishumi.
Yini manje resort wezempilo "Krynica" (Belarus)? Izibuyekezo zezivakashi eziningi ukuthi kuyinto resort ukhululekile yesimanje ifakwe imishini kakhulu, ine amakamelo zokwelapha kanye kusebenta kwahulumende, izindawo zokulala ukhululekile, ezemidlalo kanye ngezizathu zokuzithabisa ebhishi yangasese.
ngoba izinqubo zezempilo ngcono
The yokungcebeleka impilo "Krinitsa" linikeza izihambi uhlu enkulu kwezinsizakalo zokwelashwa. Kulokhu, ukusebenzisa izindlela eyingqayizivele yokwelashwa. Ukusebenzisa kuphela imishini yesimanje kunazo ukuxilonga izifo imithambo yegazi kanye senhliziyo, isimiso sokugaya ukudla bungene, uhlelo zemisipha futhi wenze izinqubo ukubhekana nalezi zifo.
Kodwa hhayi kuphela ukususa pathologies ezehlukene inikeza resort "Krynica" (Belarus). Izibuyekezo zezivakashi kule isikhungo bebonga nezinqubo ezothuthukisa ubungqabavu, afeze ukulungiswa esisindo futhi unciphise ukucindezeleka okungokomzwelo ezaphakama.
Izivakashi uphiwa uhlelo olunzulu okuhloswe ngazo ukuthuthukisa hhayi kuphela umzimba kodwa futhi ukunciphisa isisindo. Kwenye yezingxenye yaleli su kuyinto umsoco ofanele. Ngeke nje ukusho Some isisindo okweqile, kodwa futhi ukuzizwa ukudlala okungavamile wonke umzimba. Konke lokhu kungafezwa ngokusebenzisa uhlelo anikezwa sibhedlela "Krynica". Izibuyekezo zezivakashi baye baphetha ngokuthi esikhathini amasu ukuhambisana bona ungazizwa indlala. Ngaphezu kwalokho, uhlelo kuhlanganisa nokuziphatha kwansuku zonke izivivinyo oluxube yoga. Lezi umzimba kuzosiza ukuthuthukisa emalungeni nomgogodla. Ukubuyiselwa umzimba nomthelela sessions yokwelapha umculo aeroionorelaksatsii.
Spa ukwelashwa nazo zithathelwa e-ofisini sibhedlela "Krynica". Izibuyekezo zabantu abavakashela indawo yezempilo, ukubeka esiphezulu score herbal, amaminerali kanye pearl, sapropel kanye turpentine nokugeza. Ukuze abahambi sauna Finnish, pool ukuthi ligcwele lamanzi esiphethu, kanye sauna infrared.
Ngaphandle kwalokho, oyikhathalelayo impilo yabo kubalulekile ukukhetha indawo yabo lokuzijabulisa Belarus (sibhedlela "Krynica"). Impendulo kulabo abaye wavakashela resort wezempilo, uqinisekise ukuthi lokhu kukhetha ngenye yezinkampani ezingcono kakhulu.
iholide Ekhumbulekayo Nemisebenzi ngeke agcinwe kule Krasnodar esifundeni. amasevisi Ihhotela futhi izakhiwo etholakala guest house "ku Zarechnaya" (Krynica). Izibuyekezo wazivakashela kakade ke ikhuluma ubuhle umuzana nokunokuthula. It uvame ukuba beze unguye ngempela ukhathele okumatasa komuzi. Idolobhana Krynica kuyinto endaweni yothando, lapho kukhona inqwaba izivakashi. Kule ndlu isivakashi linikeza izivakashi zayo endaweni ukhululekile futhi isethi ephelele amasevisi. Eduze emakethe, izitolo zokuthenga ukudla, futhi ugibele zezingane.
amasevisi abo resort of Gelendzhik inikeza guest house "Ithemba Plus" (Krynica). Izibuyekezo zezivakashi ngokuvakashela sisikisela romance emzaneni onokuthula indawo yokuhlala ntofontofo.
Feodosia Imali Museum (Feodosia, eCrimea): incazelo, umlando kanye ezithakazelisayo amaqiniso
Ejele Solikamsk noma ikoloni edume "White Swan": Umlando kanye yesimanjemanje
Qin kanye Han Dynasty. History of the Han Dynasty. Han Dynasty: umbusi, ngesikhathi sokuwa. izenzo zomthetho we ekuqaleni Han Dynasty
Glass Imboni Worker Day eRussia - 19 Novemba